2019-08-21 | Job Vacancy in Myanmar
2019-08-21 20:20:05 ,Urgent Position From Myanmar N…
Urgent Position From Myanmar Net
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-08-21 by admin.
2019-08-21 20:19:10 ,ဝန်ထမ်း အလိုရှိသည် ( Urgent ) …
ဝန်ထမ်း အလိုရှိသည် ( Urgent )
Junior HR & admin Staff M/F (1)
HR နဲ့ပါတ်သက်ပြီး Diploma (or) certificate ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမည်
လုပ်သက်အနည်းဆုံး ၁နှစ် နှင့်အထက်ရှိရပါမည် (လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူများ လျှောက်ထားရန်မလိုပါ )
SSB , Income Tax , payroll and labor law အပိုင်း နားလည်ရပါမည်
Recruitment services ကိစ္စ များအတွက် နားလည်သူ ဦးစားပေးပါမည်
Admin ကိစ္စ အတွက် တခါတရံ အပြင်သို့ သွားရတက်ပါသည်
Microsoft Office ကို ကျွှမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတက်ရပါမည်
အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅နာရီခွဲ အထိပါ
တနင်္ဂနွေ နေ့နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် များ ပိတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
လစာ ၂၅၀,၀၀၀ (သို့ ) ညှို့နှိုင်း
မြောက်ဒဂုံ (၃၄) ရပ်ကွက် နာရီစင်မှတ်တိုင်အနီး
Short list အတွင်းပါသည့် သူများကိုသာ အင်တာဗျူးအတွက် ခေါ်သွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် ယခင်အလုပ် အတွေ့အကြုံ များကိုCV တွင် detail ရေးပေးပါရန်
2019-08-21 20:18:51 ,Urgent Position Junction City…
Junction City တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
အဆောင်နေလျှင် – 120000
အဆောင်မနေပါက – 150000
အလုပ်ချိန် – 9:00AM to 9:00PM
(🌠မှတ်ချက် 👉 အချိန်နှစ်ဆိုင်း 9:00 am to 6:00 pm & 6:00 pm to 9:00 pm လည်းရှိသည်။)
ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်တစ်ရက်နား( Saturday & Sunday မှလွှဲ၍)
Cv form လာတင်လိုပါကလိပ်စာမှာ-သံလမ်း/
2019-08-21 20:18:47 ,အောက်ပါ ၀န်ထမ်းအား (အမြန်) အလိ…
အောက်ပါ ၀န်ထမ်းအား (အမြန်) အလိုရှိသည်။ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ပုလဲကွန်ဒိုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်သည်။ ရုံးချိန်မှာ တနင်္လာမှ သောကြာ (၈:၃၀ မှ ၅:၃၀) ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ် အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင် အင်တာဗျူး အမြန်ခေါ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
IT Technician Male (1)
– B.E (IT), B.C.Sc (or) Any graduated with Network Engineer Course (or) CCNA (or) HCNA
– Age between (25) and (35) years
– Investigating IT related problems, suggesting solutions and troubleshooting
– Must have A+, Network, MS Sever, Mail hosting server, Network Design and implementation knowledge
– Data Management and interpretation skill, Problem Solving, Communication Skill, English Skill
– At Least (3) year experience in related field
Admin Assistant Male (1)
– အသက် (20 မှ 28) ကြား
– English4skills နှင့် Computer သုံးနိုင်ရမည်
– သွက်လက်ပြီး ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (2) နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်
အထက်ပါ ရာထူးများအား လျောက်ထားလိုပါက hr@mandalayproductions.net သို့ email ပေးပို့ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
2019-08-21 20:17:14 ,Company တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခြင်း …
1.Sales Staff (Female) –2posts
– အနည်းဆုံး ၁၀ တန်း တက်ရောက်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
-လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
-Sales ပိုင်း စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
– လစာ 150000kyats to 200000 kyats
-Commission(+)၊ Uniform(+)၊ ရက်မှန်ကြေး (+)
အမှတ် (၃၆) ၊ ကျော်သူ (၂၅) လမ်းထိပ်၊ သစ္စာလမ်းနှင့် ဝေဇယန္တာလမ်းထောင့်၊ (၉) ရပ်ကွက် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
E-mail ဖြင့် လျှောက်ထားလိုပါက hr.tma2016@gmail.com သို့ ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက☎ 09-445578789 သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
2019-08-21 20:17:05 ,Responsibilities • Present, p…
• Present, promote for Land Survey and Soil Investigation services
• Coordinate with team members and other departments.
• Analyze the territory /market’s potential, track projects and status reports.
• competitive activities, and potential for new idea and services.
• Marketing, communication, administration, orarelated field
• Experience in Marketing representative for Survey and Soil.
• B.Sc(Geology) or equal qualification
2019-08-21 20:13:46 ,Pizaa ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်…
Pizaa ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမည်။ pizza အပြငိ တစ်ခြားbakery များလုပ်တတ်လျှင်ပိုကောင်းသည်။
2019-08-21 20:13:33 ,Ruby Job Agency မှသင့်ကို နွေး…
🎁Ruby Job Agency မှသင့်ကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေပါသည်။
1. အလုံမြို့နယ်ရှိ Furniture Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 200,000 ~ 230,000
– ဘွဲ့ရ၊အသက်(၃၀)အောက်၊ – အတွေ့အကြုံမလို(၆)လ Computer Word,Excel အနည်းငယ်သုံးနိူင်သူ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။ယူနီဖောင်းရှိသည်။
– (22 – 8 – 2019)ကြာသပတေးနေ့ နေ့လယ်(၂)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
2. ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Home Decoration Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Accountant F(3)Posts
– လစာ 200,000 ~ 250,000
– ဘွဲ့ရ၊ LCCI Level I III အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်
(2) Audit F(3)Posts
– လစာ 250,000 ~ 350,000
– ဘွဲ့ရ၊ LCCI Level I II အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (22 – 8 – 2019)ြာကာသပတေးနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
3. မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကားအပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
– ဘွဲ့ရ၊ အသက်(၃၅)အောက်၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – Computer /English 4Skill Basic – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှညနေ(၅)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (22 – 8 – 2019)ကြာသပတေးနေ့ မနက်(၁၀)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
4. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Electronic ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Marketing Staff M/F(3)Posts
– လစာ 200000- 250000
– ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ၊အသက်(၃၅)အောက် – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှည(၅း၀၀)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက်းသောကြာနေ့(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (22-8-2019) ကြာသပတေးနေ့ မနက်(၁၀)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။.
5.သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
– လစာ 200000 – 250000(For Japanese Language)
(2) DTP Staff F(2)Posts
– လစာ 200000 – 250000(For Computer Shop)
– ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်၊အသက်(၃၀)အောက် – Computer Typing ကျွမ်းကျင်
(3) Photoshop M/F(3)Posts
– အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှညနေ(၆)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက်းတစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (22-8-2019) ကြာသပတေးနေ့ မနက်(၁၀)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
6. မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Sale F(10)Posts
– လစာ 140,000 ~ 160,000
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီမှညနေ(၆)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်(၁)ရက်နှင့် အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
– (21-8-2019)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်(၁၀)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
7. ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Sale & Marketing Staff M(5)Posts
– လစာ 180,000 ~ 200,000
– ဘွဲ့ရ၊ အသက်(၂၅)အောက်၊အတွေ့အကြုံမလို – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှညနေ(၅)နာရီထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (21 – 8 – 2019)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
8. ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိConstruction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Warehouse Supervisor M(3)Posts
– လစာ 250,000 ~ 350,000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်၊အသက်(၃၅)နှစ်အောက်
(2) Safety Officer M(3)Posts
– ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ၊အသက်(၃၅)အောက် – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (22-8-2019) ကြာသပတေးနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
9. တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Driver M(3)Posts
– လစာ 250,000 ~ 300,000
– လိုင်စင်အနက်(Auto&Manual)မောင်းနိုင်ရမည်။ – အသက်(၂၅-၃၀)အတွင်း၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီ မှ ညနေ(၆)အထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်လ(၂)ရက်ပိတ်သည်။
– (22 – 8 – 2019)ကြာသပတေးနေ့ မနက်(၁၁)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
10. ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ Diamond & Jewellery ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Marketing Executive F(3)Posts
– ဘွဲ့ရ၊Computer Basic၊Marketing Management ၊ – အသက်(၃၀)အောက်၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၁၀)နာရီ မှ ညနေ(၆း၃၀)အထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။
ရုံးလိပ်စာ – အမှတ်(၂/၄) ၃လွှာ(၀ဲ)၊သိမ်ဖြူလမ်းနှင့် မြရာကုန်းလမ်းထောင်၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။(သိမ်ဖြူစာတိုက်မှတ်တိုင်ဆင်းပါ)သို့လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။
2019-08-21 19:24:15 ,Ruby Job Agency (R.J.A)မှသင့်က…
1. စမ်းချေင်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
– လစာ 300,000 ~ 350,000
– ဘွဲ့ရ၊ LCCI I II – အသက်(၃၀)အောက်၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီ မှ ညနေ(၅)နာရီအထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (23 – 8 – 2019)သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၁၂)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
2. ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ဆေးဆိုင် ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Sale Staff F(3)Posts
– လစာ 150,000 ~ 200,000
– ဆယ်တန်းအောင်၊ အသက်(၂၈)အောက်၊ – အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်၊နေစားငြိမ်းနေနိုင်ရမည်။ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီ မှ ညနေ(၈)နာရီအထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (23 – 8 – 2019)သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၂)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
3. ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ Event Service Company ကြီးတစ်ခုအတွက် (1) Event Supervisor M/F(3)Post – လစာ – 200000 ~ 300000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ ကျောင်းကိစ္စကင်းရမည်။ English4Skill Basic – အသက်(မကန့်သတ်)၊လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၉း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၀၀)နာရီ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေနေ့ပိတ်သည်။ – (23-8-2019) သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူး ၀င်ရပါမည်။
4. မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိTrading Company ကြီးတစ်ခုအတွက် (1) Computer Account F(3)Post – လစာ – 180000 ~ 250000 – ဘွဲ့ရ၊Computer Basic၊ Excel ကျွမ်းကျင် – အသက်(မကန့်သတ်)၊လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၈း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၀၀)နာရီ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေနေ့ ၊အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်သည်။ – (23-8-2019) သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူး ၀င်ရပါမည်။
5. မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတစ်ခုအတွက် (1) Computer Account M(3)Post – လစာ – 180000 ~ 250000 – ဘွဲ့ရ၊ ဆယ်တန်း၊(ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း)၊ – Computer Word၊ Excel၊ M&E typing ကျွမ်းကျင်ရမည်။ – အသက်(၃၀)အောက်၊လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေနေ့ ပိတ်သည်။ – (23-8-2019) သောကြာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူး ၀င်ရပါမည်။
6. အလုံမြို့နယ်ရှိ Furniture Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
7. ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Home Decoration Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
8. တာမွေမြို့နယ်ရှိ Phone Distribution ဆိုင်ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
(1) Marketing Manager M(2)Posts
– လစာ 600,000 ~ 800,000
– ဘွဲ့ရ၊Marketing Management သင်တန်းပြီးသူ – တရုတ်စကားရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည် – အသက်(၂၈)အထက်၊အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီ မှ ညနေ(၅း၃၀)အထိ – အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– (23 – 8 – 2019)သောကြာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီတွင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိသည်။
9. မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကားအပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
10. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Electronic ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
11.သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
12. ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိConstruction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
13. တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
14. ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ Diamond & Jewellery ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
2019-08-21 18:05:25 ,#Wearehiring Marketing Manage…
Working Hours-Mon to Fri (8am ~ 5pm)
Sat (8am ~ 12pm)
Location – Hlaing Tharyar Tsp,Ygn
• To manage the people workforce
• To manage the promotional event & exhibition
• To manage update marketing tools
• To manage Sales Catalogue, Flyer, Pamphlet, File folder,etc..,and
Digital Campaigns (Webpage, Social media)
• Special task for sales force application management
• To prepare and report of breakeven analysis of expense and
effectiveness of marketing tools
• To manage daily and monthly expense of marketing department
• To advertise in Newspaper, Directory, Calendar and as require
other print out media (OBG), Bill Board, Light box
• To prepare and manage yearly event plan
• To do market research of company products and analysis
• To take responsible for the leading the company’s sales efforts in
Myanmar heavy machinery markets
• To analysis potential strategic partner relationships for company
• To manage and execute the marketing plan in line with company
long term strategy and growth targets to increase lead and revenue
• To manage for all tender case & tender documents files before
announcing on Newspapers.
•5years in related field
• Additional certificates in related position.
• Ability to do multi-tasking professionally under pressure.
• Excellent customer service and organization skills areamust.
• Professional appearance and attitude areamust.
• Continuous learning and improving areamust.
+959 32338921,+959 256232088
2019-09-20 10:54:57 , 20.9.2019အင်​တာဗျူးရှိမည်​။…
2019-09-20 10:54:56 ,ကမာရွတ်​မြို့နယ်ရှိ Distributi…
2019-09-20 10:54:55 ,တာမွေမြို.နယ်ရှိ Cosmetic Comp…
2019-09-20 10:54:50 ,Admin တင်ခွင့်ပြုပါ Sales Pro…
2019-09-20 10:54:45 ,ရန်ကုန်မြို့ အတွင်း စက်ဘီး ဖြ…